Tora-bato variraraka no nampivarahontsana ny mpandalo teo amin’ny lalana Lally Tollendal, ny marainan’ny alatsinainy 12 febroary teo, taty Antsiranana. 13 février 2018
Araka ny fantatra dia tovolahy iray mpianatra ao amin’ny lisea ao amin’ny kilasy famaranana sokajy D no nitarika ny namany telo hafa, tonga nanafika tovolahy iray, iray kilasy aminy.
Araka ny voalaza dia ny folakandron’ny zoma lasa teo dia nilatsahan’ny tapaka hazo ny tongotr’ity mpianatra nanafika ity, izay nihevitra fa ny namany avy tao aoriany no nandatsaka izany. Araka ny voalaza anefa latsaka ho azy io hazo io. Tao an-dakilasy no nitrangan’izany ny zoma teo ary misy vavolombelona.
Tsy nanaiky izany ilay zalahy ka niafara tamin’ny ady totohondry iny rehefa nirava ny sekoly iny. Mbola tsy nahavaly ny namany izy ka ompa razana no setriny nataony tamin’ny namany. Araka ny fantatra hatrany dia tsy tonga nianatra ilay zalahy nilatsahan’ny hazo tao an-dakilasy ny zoma lasa iny. Ny zava-misy dia tsy maty voalavo an-kibo ilay zalahy ka tonga namaly faty ary nitondra namana hafa ihany koa.Tsy tahotra ny an’ity farany satria sahiny ny nanafika ny namany tao an-dakilasy fampianarana amin’ izany.Teo anatrehan’ny mpianatra rehetra sy mpampianatra no nidiran’ireto andian-jatovo ireto tao amin’ny lisea. Tsy nanampo ilay zalahy lasibatra ka voatora-bato teo amin’ny laharany ka vaky loha.
Ankoatr’izany dia zatovovavy iray tsy manan-tsiny ihany koa no voatora-bato. Samy nentina haingana tao amin’ny hopitaly manarapenitra. Mbola naneho ny hatezerany ireo zatovo nanafika ireo ka tora-bato variraraka no nampihiakiaka ny mpandalo sy ireo mpianatra madinika akaiky teo. Nisy niantso polisy fa efa tafaporitsaka nilefa ireo marofelana ireo. Araka ny voalaza dia avy ao Ambalavola ireo zatovo ireo. Marihina fa fantatra ny mombamomba ilay zalahy sahy tonga namaly faty nanafika ny samy mpianatra tao amin’ny toeram-pianarana ity.
Efa mandeha ny fikarohana ataon’ny polisy mahakasika azy ireo. Raha ny zava-misy no asian-teny dia azo ambara fa tsy misy tahotra ity mpianatra efa amin’ny kilasy famaranana ity, ka nahavita nitarika namana nanafika tao amin’ny sekoly fianarany. Ny fantatra dia tahaka ity fihetsika niseho ity no fomba ratsy ataon’ireo foroches mpampihorohoro ireny. Ho fantatra eo izay mety ho tohiny.